Qubsuma Koo 9: Jireenya kootiin gammadaa ta'us, nyaata biyyaan yaada - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright SAMUEL ARAYA
Biyya Eeshiyaa keessatti kan argamtu, Siingaappor keessan jiraadha. Maqaan koo Saamu'eel Araayaa jedhama. Ergan Itoophiyaadhaa bahee waggoonni baay'een darbaniiru.
Osoon gara biyya kanaa hindhufiin duras dursee barnootaaf waggoota kudhaniif tureera. Booda keessa ammoo hojiif keessa jiraachaa tureera.
Amma ammoo carraa hojii dhaabbata boba'aa galaana jalaa baasu, Saayippeem jedhamuun beekamu tokkoon mindeeffamuun gara Singaapoor dhufeera.
Anis gaheen hojii kiyyaas maandiisa to'ataa dooniiwwan boba'aa deddeebisuuf qophaa'aniif jijjiirraa meeshaa taasisuufi meeshaalee dabalataa isaan barbaachisan geeddaruun hojjadha.
Singaappoor magaalaa qulqulluudha. Kana malees ergan asi dhufee kaasee kan baayyee na dinqu, wanti hunduu sirna kan qabateedha. Jireenyi ishee garuu baayyee mi'aawaadha. Waanti hundumtuu haala namoota hundaaf ta'uun yaadamee kan qindeeffameedha. Fakkeenyaaf geejiboonni uummataa…….?
Goodayyaa suuraa Gosti nyaataa Diimi Suum jedhamuufi hurkaan bilchaatu, saambusaa fakkaata
Gama nyaataatiin baayyee hin rakkadhu. Nyaata isaanii diimi Suun jedhamuufi hurkaan bilchaatu kan saambusaa fakkaatu nyaachuu baayyeen jaaladha.
Nyaata Itoophiyaa hanga har'aatti argachuu hindandeenye. Dharraa kiyya bahuuf nan nyaadha osuman jedheeyyuu manni nyaataa Itoophiyaanoota dhihoo jedhamu fageenya km 2000 irratti biyya Taayilaandiitti magaalaa Baangookitti argama. Kanaafuu Diimi Suu kiyyan sooradha.
Daawwannaaf gara Itoophiyaa ergan deebi'ee baayyee turee jira. Haa ta'u malee waanan yaadadhu baayyeetu jira. Leenca mana tiyaatira Biyyaalessaa biratti argamu, daandiin Charchiliifi naannoo Lagaharree baayyeen yaadadha.
Dorgomaafi Jaappaanitti barsisaa sigigoo cabbii
Biyyaa ergan bahee waggoota kudhaniin oli waan guuteef, ammatti maal akkan yaadu dubbachuun na rakkisa. Sababiin isaas waanan yaadu osoon eeree, maatiin nu hirraanfatte jechuun na komachuu danda'u. Ta'us yeroo hunda yoo yaadu gara sammuu koo kan na dhufu kabaja ayyaana Masqalaati.
Ganama ka'anii batasikaana deemuun sun, isaan booda ollaa waliin laaqana nyaachuufi galagalli yoo gahu ammoo damaraa/guca gubanii ibsaa gammachuufi urgaa ayyaanaa akkasumas waca sana hundan yaada.
Gama biyya amma jiraadhutiin, Magaalaa akka Singaapoor gamoodhaan gutamte kan biraa addunyaa irra kan jirtu natti hin fakkaatu. Bakkin ani jiraadhu gamoon kan marfameedha. Ta'us garuu miira nama gammachiisu qaba. Karaa saaloonii kootii asii gadi foddaan yoon ilaalu, miira nama gammachiusutu natti dhagahama.
Goodayyaa suuraa Foddaa koorraan gara alaa yogguun ilaalu miira gaariitu nati dhagahama
Magaalaan Singaapor kan nama dhiphiftu miti. Hanga sirni eegameetti magaalaa bilisummaafi iftomina jajjabeessitu taateen argadhe. Lammiilee biyyoota garaa garaa sababii adda addaatiin dhufanis ni kessummeessiti. Yeroo hunda kan na dinqu garuu sirna isheeti.
Singaappooritti balfaa kamiyyuu lafatti gatuun hin danda'amu. Tajaajilawwan uummataa irratti nyaatas ta'e dhugaatii fayyadamuun dhorkaadha. Caalaa kan na dinqe ammoo maastiikaa daandii irratti alamfachuun dhorkamuu isaati. Jiraattoonni magaalattiis baayyee seera kan kabajan, namoota gaariifi amanamoodha. Hundinuu waa'ee jireenya mataa isaanii malee namni waa'ee nama biraa cinqamu badaa hinjiru.
Ijoollummaa jalqabee Kaamboodiya jiraachuun fedha ture
Jireenya kiyyaan baayyee gammadoo ta'ulleen, ciree koof nyaanni jajii akka najalaa hafe natti dhagahama.
Namni kamiiyyu bakka itti dhalate irraa gara biraatti yoo socho'u jireeny itti cimuu mala. Ani garuu abbaa carraati, sababii Faransaayi yoo jiraadhus ta'e amma qofaa koo ta'ee hinbeeku.
Garuu biyya hinbeekamne yoo deemamu yaaddoon ni jiraata. Duraan yoo Itoophiyaadhaa bahu ijoolluumaanis waan tureef ta'e hinbeeku garuu hinsodaanneen ture. Amma garuu tokkoon tokkoo murteen ani taasisu dhiibbaa waan qabaatuuf, yoo xinnaatees yaaduun koo hinolu.
Akka carraa ta'e garuu Singaapoor yoon dhufu naman beeku waanan qabuufuu baayyee hinrakkanne ture. Namoonni waliin hojjannuus na waliin waan turaniif badaa hin sodaannee. Ta'us Singaappoor biyyoota guddatan jedhaman keessaa waan taateefuu fagaadhuus akkan waan bosona galeetti hin yaadu.
Barnootaafi sadarkaa jireenyaatinis haala gaarii irrattan argama. Maallaqa yoo qabaatan ammoo biyyattii carraawwan hedduuf banaa taateedha. Kanaafuu waanan rakkadhu omtuu hinjiru.
Waggaa har'aa Ertaa'elle dhaqeen ture. Wayita ammaa kanatti Itoophiyaa dhaqi osoo naan jettanii osoon achitti of argeen nan gammada ture. Waggaa har'aa hiriyyoota koo waliin achittan dabars. Jireenya koo keessatti lafa akkasii argee hinbeeku. Gara fuula duraatis waan akkasi kanan argu natti hinfakkaatu.